China E-1 Intelligent Ukondla Amanzi Ukuveliswa kunye nefektri | Ukudibanisa
Kutheni le nto izilwanyana ezifuywayo zifuna abantu abondla amanzi ngokuqonda?
Kwiimeko eziqhelekileyo, abanini bezilwanyana basebenzisa izitya eziqhelekileyo zezilwanyana ukubonelela ngamanzi ngeemfuno zokondla. Kodwa into ekufuneka yaziwe ngokucacileyo kukuba ingaba amanzi okusela esilwanyana acocekile kwaye acocekile, nto leyo eya kuthi ichaphazele impilo yezilwanyana. Kwaye sihlala sifumanisa ukuba izilwanyana zixhathisa ngakumbi emanzini ashiye ixesha elide. Kungenxa yokuba amanzi kwisitya sezilwanyana zasekhaya ahambi, ke kulula ukuba kuthintelwe ukungcola emanzini ixesha elide kwaye ukungcola emoyeni kuya kubhengezwa kumphezulu wamanzi. Emva koko izala intsholongwane.
Ukondla aManzi okrelekrele kwe-E-1 kuyilelwe ukujongana nezi ngxaki kwaye kuya kuphucula indlela abanini bezilwanyana abaziphatha ngayo izilwanyana zasekhaya.
Amanzi angeniswayo angeniswayo
Amacala amathathu ayawaqonda amanzi, kwaye amanzi anokuveliswa ngokuzenzekelayo ngaphakathi kwe-30cm ukusuka kulo naliphi na icala langaphambili, lasekhohlo nelasekunene, elivuselela umdla wesilwanyana kumanzi okusela. Xa isilwanyana sishiya uluhlu lokuziva, impompo yamanzi iyayeka ukusebenza emva kwemizuzwana eli-10
Ukucoca kathathu, ukujikeleza ukucoca
Ukugqithisa kwe-calcium kunye ne-magnesium ions emanzini yinto ebaluleke kakhulu kumatye okuchama izilwanyana kunye nezinye iingxaki zomchamo, kunye nezinto ezinobungozi ezinjenge-chlorine nentsalela ye-ions enzima emanzini ayibeka ngqo engozini impilo yezilwanyana zasekhaya. Ke ngoko, le mveliso isebenzisa ukucoca okunzulu okuphindwe kane kunye nokuhluza ukuphucula umgangatho wamanzi athambileyo kunye nokuvumela izilwanyana zasekhaya ukuba zisele amanzi asempilweni: i-tray meshes, ulwelo lokuqala lokucoca, ukuthintela ukungcola okukhulu kwevolumu njengeenwele; Ucoceko oluphezulu lokucoca ulwelo ukwahlula amasuntswana amancinci afana nesanti kunye nomhlwa; coconut Shell activated carbon ifunxa intsalela yeklorini kwaye isusa ivumba; I-ion exchange resin icoca kakhulu i-ion enzima, njl.
Uyilo lokusetyenziswa olungafakwanga
Emva kokutshaja kwe-USB, inokusetyenziswa ngaphandle kokungena ngaphakathi ekuthinteleni izilwanyana zasekhaya zingaluma kwaye zonakalise ukhuseleko lwezilwanyana zasekhaya. Ukutshaja iiyure ezi-4 kungasetyenziswa ngokuqhubekayo kangangeeyure ezisi-7, ukulinda ukuya kuthi ga kwiveki e-1
Ukusetyenziswa kweempompo zamanzi ezihlangabezana nemigangatho yaseYurophu neyaseMelika kuthintela ukutshisa okomileyo, ukusetyenziswa okuncinci kunye nokonga umbane, kwaye kwandisa amandla esimumu, okwenza ukuba yomelele ngakumbi. Impompo yamanzi ethe cwaka nge-5V isinciphisa ngokufanelekileyo isandi esityhafileyo sokuhamba kwamanzi ukuya kwi-40 decibel
Ubukhulu: 185mm * 203mm * 160mm
● Ulawulo lomgangatho olungqongqo ukuqinisekisa ukuba inqanaba elifanelekileyo leemveliso zezilwanyana lilingana ne-100%
● Ixabiso lokuthengisa ngokuthe ngqo kumzi-mveliso, ukubonelela ngamaxabiso okhuphiswano ngakumbi kubathengisi
● Ime kwisixeko esinyamezelayo kakhulu kwizilwanyana zasekhaya, kwaye uninzi lweqela le-R & D belinxibelelana nezilwanyana zasekhaya ukusukela ebuntwaneni, oko kuthetha ukuba singakhetha ngcono kwaye siphuhlise iimveliso zezilwanyana
● Ukubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nokubonelela ngesilwanyana esinexabiso eliphezulu, ukhuphiswano olungcono
● Ukusebenzisana nendawo yokugcina phesheya e-United States, Canada, Germany nase-Netherlands, ezinokuqinisekisa ukuhanjiswa okukhawulezayo kwesampulu okanye ibhetshi encinci
● Inkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa, ukubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha kwi-Intanethi kunye nenkonzo yokubuyisa echanekileyo
Egqithileyo E Umbane weZilwanyana eziBethayo
Okulandelayo: I-E-2 Umthombo wokuSela iApple